Mvongamupopoto muBulawayo paKomisheni yaVaMotlanthe
Komisheni iri kutungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa, VaKgalema Motlanthe, iyo iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu, yakatambirwa nemhirizhonga kuLarge City Hall muBulawayo nemusi weChishanu.
Bata murefu bata mupfupi iyi yakaitika mushure mekunge mumwe murume apomera mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, mhosva yekuuraya vabereki vake munguva yeGukurahundi kuma 1980.
Izvi zvakabva zvapa kuti vanhu varwisane nezvibhakare nekukandirana zvigaro. Vanhu vana vanonzi vakabva vasungwa nemapurisa.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, rinoti magweta aro ari kumirira vana vakasungwa vanosanganisira VaWisdom Mkhwananzi, VaMyor Ncube, VaWelcome Moyo uye VaMarshal Sibanda.
Mutauriri weZLHR, VaKumbirai Mafunda, vanoti pari zvino vanhu ava vari kuBulawayo Central Police Station.
Komisheni yakazonzwa pfungwa dzevanhu zvekare mushure mekunge kwauya mapurisa akawanda mamwe akapakatira zvombo.
Vamwe veZanu-PF neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozane Khupe vakapa humbowo vakange vachipomera vatungamiri veMDC, VaNelson Chamisa, naVaTendai Biti, mhosva yekukonzeresa mhirizhonga iyi.
Vamwe vakataura ndiVaMabhuto Moyo mumwe wechidiki weZanu-PF kuBulawayo avo vakati VaChamisa vainge votogadzirira kuenda kuState House mukukunda kana kukundwa musarudzo.
Imwe nhengo yeMDC-T inotungamirwa naMuzvare Khupe, Amai Shiela Musonda, vakatiwo nyaya dzemhirizhonga dzavanoti dzakaparwa kunhengo dzebato ravo dzaifanira kuongororwa.
Nhengo yeMDC yakapawo humbowo, VaFelix Magalela Mafa Sibanda, vakati vanoda kuziva chete kuti ndiyani akatumira mauto kunopfura vanhu.
VaMafa-Sibanda vakati semaonero avo, ZEC ndiyo yakakonzera mhirizhonga nekunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo.
Asi vakawanda vakange vachipa humbowo hwekuurayiwa kwakaitwa hama dzavo munguva yeGukurahundi kubva muna 1883 kusvika 1987 kuMidlands neMatabeleland panofungidzirwa kuti pakafa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri zvichipfuurwa nemauto eFifth Brigade vachiti nyaya idzi dzinofanira kuferefetwa sezviri kuitwa kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto kuHarare.
Vamwe sekuru vakapa humbowo vakati vakaurayirwa muzukuru wavo munguva yeGukurahundi uye vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe.
Ko komisheni iyi yaifanira kuve iri kuBulawayo here kana mhirizhonga yakaitika kuBulawayo?
Vaimbova mumiriri weZanu-PF kuMpopoma Pelandaba, VaJoseph Tshuma, vanoti hapana chakaipa.
Nyaya yeGukurahundi iri kuongororwa nekomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission uye vachitaura nenhepfenyuro yeCNN muna Gunyana, VaMnangagwa vakati vakazvipira kutambira chero zvinenge zvaburitswa nekomisheni iyi.
Mumwe komishina muchikwata chaVaMotlanthe, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vanotungamira bato reNational Constitutional Assembly, vanoti vakaenda kuBulawayo nenyaya yekuti vari kuda kunzwa kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose.
Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzinosanganisira vaimbove munyori mukuru weCommonwealth, VaEmeka Anyaoku vekuNigeria, vaive mukuru wemauto kuTanzanian, VaDavis Mwamunyange, uye nhengo yeZanu-PF Muzvinafundo Charity Manyeruke.